Orinasa fampahalalam-baovao indostrialy - mpanamboatra sy mpamatsy vaovao ny indostria Sina
Ra gliokaozy Fanaraha-maso System
Microprocessor Single Syringe mba hampahahendry Pump
Rora Fertility Tester
SEJOY HEMOGLOBIN METER SERVICES Ho an'ny Fahasalamanao
Fotoana famoahana: 11-08-2019
Ny fandrefesana hemôglôbinina dia ilaina amin'ny fizahana ny fahasalaman'ny mararanao sy ny fitazonana ny kalitaon'ny fiainany. Ny fihenan'ny haavon'ny hemôglôbinina dia mety ho famantarana ny olana maro mety hitranga toy ny tsy fahampian'ny vy amin'ny marary. Satria ny fanaraha-maso hemôglôbinina dia tena ilaina amin'ny ara-batana, SEJOY h ...Lire la suite »
Fiakaran'ny tosi-drà: ny ronono, broccoli, yaourt ary tofu dia mety hampihena ny famakian-teny
Fotoana famoahana: 10-09-2019
Ny fiakaran'ny tosi-drà dia misy fiantraikany amin'ny iray amin'ny olon-dehibe efatra ao UK, saingy maro ny olona tsy mahalala fa voan'izy ireo izany satria tsy dia miharihary na tsikaritra ireo soritr'aretina ireo. Ny fomba tsara indrindra hahitana raha manana tosi-dra ianao dia ny fizahana tsy tapaka ny famakianao, na amin'ny GP na amin'ny farmasinao eo an-toerana na amin'ny fampiasana ...Lire la suite »
Fiakaran'ny tosi-drà: mety hampihena ny vakiteninao ny ranom-boankazo
Fotoana fandefasana: 09-29-2019
Ny fiakaran'ny tosi-drà dia misy fiantraikany amin'ny iray amin'ny olon-dehibe efatra ao Angletera, saingy betsaka ny olona voan'io aretina io no tsy mahalala hoe voan'izany izy ireo. Izany dia satria tsy fahita firy ny soritr'aretina. Ny fomba tsara indrindra hahitana raha manana tosi-dra ianao dia ny fizahana matetika ny famakinao ataon'ny dokotera na ny farmasinao eo an-toerana ...Lire la suite »
Fotoana fandefasana: 09-11-2019
A lot of friends ask doctor, why does the doctor of the hospital like to use electronic sphygmomanometer, but charge a patient to go home with electronic sphygmomanometer? In fact, this is our misunderstanding, there is no such rule, the current electronic sphygmomanometer and mercury sph...Lire la suite »
Fanavaozana ny Protocol International ESH 2010
Fotoana fandefasana: 10-31-2017
The International Protocol noho ny fankatoavana ny tosidra handrefesana ny hevitra ao olon-dehibe dia nohavaozina ny Eoropeana Society ny fiakaran'ny tosidrà in 20101. Maro ny fanovana ao amin'ny nohavaozina protocole manaiky fa efa nihatsara fitaovana marina amin'ny fandrosoana teknolojika, ary ny passin ...Lire la suite »
Fotoana famoahana: 10-05-2016
Tamin'ny 2013, ny Food and Drug Administration (FDA) dia namoaka lalàna farany nametraka rafitra famaritana fitaovana tokana natao hamantarana tsara ireo fitaovana amin'ny alàlan'ny fizarana sy fampiasana. Ny lalàna farany dia mitaky ny fampidirana amboaran-tsoratry ny fitaovana ny mari-pamantarana tsy manam-paharoa (UDI) amin'ny mari-pamantarana sy ny p ...Lire la suite »
Famantarana fitaovana tsy manam-paharoa - UDI
Fotoana fandefasana: 12-28-2015
FDA dia manangana rafitra famaritana fitaovana tokana hahafantarana tsara ireo fitaovana fitsaboana amin'ny alàlan'ny fanaparitahana sy fampiasana azy ireo. Rehefa ampiharina tanteraka, ny marika amin'ny ankamaroan'ny fitaovana dia hampiditra mpanondro fitaovana tokana (UDI) amin'ny endrika azo vakina amin'ny olona sy amin'ny masinina. Tsy maintsy submi ihany koa ireo mari-pamantarana fitaovana ...Lire la suite »
Address: Building 2, No.202, Zhenzhong Road, West Lake Toekarena &. Teknolojia Zone, 310030 Hangzhou, Sina